Ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nlegharị anya na-ekwu okwu na Nzukọ Ndị Isi Njem Ọchịchị Africa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndị ọkachamara na-ahụ maka njem nlegharị anya na-ekwu okwu na Nzukọ Ndị Isi Njem Ọchịchị Africa
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Ghana • nzukọ • News • Mgbasa Ozi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nzukọ ndị njem na-eme njem nlegharị anya n'Africa na-abịa n'ihu bụ ọgbakọ ndị njem nlegharị anya nke ọha na eze nke Pan-Africa nke ndị njem njem njem Africa na-akwado.
Ndi Africa Tourism Leadership Forum (ATLF) na-abịa abịa na onyinye a bụ ihe raara onwe ya nye Pan-Africa nke ọha na eze na mpaghara ndị njem na-akwado ya. Ndị na-eme njem nlegharị anya n'Africa (ATF). Na-eme na Accra International Conference Center (AICC), Ghana na August 30 na 31, 2018, usoro ihe omume nke Forum na-elekwasị anya na ụzọ dị iche iche iji kwado azụmahịa na ohere dị oke mkpa maka ndị njem Africa na ndị njem njem.
Ndi nhazi ihe na ulo oru ndi nleta, Ghana Tourism Authority, nwere obi uto ikwuputa nkwenye nke ndi okwu ozo n’uwa a, ndi bu ndi okacha amara nke ulo akwukwo na ndi ulo oru ndi ozo iji kesaa ihe omuma, omuma na ihe omuma. Ha gụnyere Tim Harris, onye isi oche nke Wesgro, South Africa, Aaron Munetsi, onye isi njikwa nke South Africa Airways, Africa na Middle East, Prọfesọ Dimitrios Buhalis nke Mahadum Bournemouth, Jacinta Nzioka, Director Director nke Kenya Tourism Board, Rosette Rugamba, Onye isi Nchịkwa nke Songa Africa na Dr. Kobby Mensah nke Mahadum Ghana Business School.
Oge a ga-elekwasị anya na omume kachasị mma nke ụlọ ọrụ ụwa, ịmebe iwu na-aga n'ihu, usoro ụlọ ọrụ na ihe ọhụrụ. Ndị a ga-aga n'ihu Masterclass na Sustainable Tourism Product Development - Ntụrụndụ na Business Tourism / Ihe omume na 30 August, nke Prọfesọ Novelli nke Mahadum Brighton duziri. Ndị bịara gụnyere ndị na-eme iwu, ndị isi azụmaahịa na ndị ọchụnta ego ga-enweta ihe ndị a site n'ịmụta, ịkparịta ụka n'andntanet na ịmepụta njikọ azụmaahịa ọhụrụ. Dr. Kobby Mensah, ọkachamara na ahịa njem nleta na Mahadum nke Ghana Business School (UGBS) kwuru na “ATLF na-egosi oke ọrụ Africa dị na njem nlegharị anya ụwa, ọ na-egosikwa nke ọma usoro mmepe ọhụrụ nke kọntinent nke njem nlegharị anya.
Prọfesọ Dimitrios Buhalis, Onye isi nke Ngalaba Na-ahụ Maka Njem Nleta na Ọbịa na Mahadum Bournemouth, na-ekwukwa na Africa nwere ohere dị egwu maka uto na mmepe nyere ịpụ iche nke akụnụba njem nlegharị anya ya. Dabere na Prọfesọ Buhalis "ohere a kwesịrị ịchọpụta iji dọta ego iji melite akụrụngwa, netwọọdụ njem na njikọta na ndụ kacha mma maka ndị obodo." Usoro ihe omume ụbọchị abụọ a nwere isiokwu na-egosi ịmebe iwu na-aga n'ihu, ime njem intra-Africa, mmụba nke akụnụba site na njem, ihe ọhụrụ, ụkpụrụ dị mma na mmepe akụrụngwa nke njem na Njikọ Ọha na Ọha. “Ekwenyere m na Nzukọ ahụ bụ ikpo okwu magburu onwe ya maka ndị na-eme iwu, ndị isi ụlọ ọrụ na ndị okike ihe ọmụma ka ha wee malite mbido usoro ahụ site na ijikọ ọnụ n’etiti ndị egwuregwu dị iche iche, na-emekọ ịdị n’otu na iwulite àkwà mmiri. Enwere m obi ụtọ inye onyinye, ”Buhalis na-agbakwụnye.
Debanye aha na: www.tourismleadershipforum.africa ịga, nweta usoro zuru ezu na ụdị nhọpụta onyinye. Iji nwetakwuo ihe ọmụma, kpọtụrụ Nwada Nozipho Dlamini na:
[email protected] ma ọ bụ kpọọ na + 27 11 037 0332.
The Africa Tourism Leadership Forum (ATLF) bụ ikpo okwu mkparịta ụka Pan-Africa nke na-eme ka ndị nwere oke mkpa si njem njem Africa, njem nleta, ile ọbịa na ụgbọelu. Ebumnuche ya bụ ịnye usoro ikpo okwu maka ịkparịta ụka n',ntanet, ịkekọrịta nghọta na ịchepụta atụmatụ maka njem na-aga n'ihu na mmepe njem na kọntinent ahụ. Ọ na-elekwasị anya na mmelite nke oke nhatanha Africa. Ọ bụ nke mbụ ụdị ya ma kwalite njem nlegharị anya dịka ogidi mmepe mmepe.
Ndi Ghana Tourism Authority (GTA) na-akwado ogbako a n’okpuru nkwado nke ndi Ghana Ministry of Tourism, Arts and Culture, ihe omume a ga - eme n’abali iri-ato n’ime onwa iri ato na ato n’ime onwa ogugu onwa ato na onwa ato, Ghana na Accra International Convention Center, Ghana.